Toekarena - Hanamora ny fahazoan'ny olona trano ny NOVA Groupe
Toekarena – Hanamora ny fahazoan’ny olona trano ny NOVA Groupe
Publié mars 17, 2020 par Book News
Manorina trano takatry ny olon-tsotra nefa mifanaraka amin’ny fenitra eoropeanina ny Nova Groupe.
Trano manaraka ny fenitra
Mbola sarotra ny manangana trano eto amintsika. Isany olana amin’ny fanangan-trano ny tsy fanampian’ny vola sy ny hoenti-manana. Eo ihany koa ny olana amin’ny fitandroana ny fananana, ny fisian’ny hosoka sy ny fanaraham-penitra eo amin’ny fotodrafitrasa. Noho izany dia nanangana ekipa ny Nova groupe izay ahitana ireo teknisianina efa manana traikefa sy ny fahaizamanao. Ahitana Injeniera sy ny mpiraki-teny ny ao amin’ny Nova groupe izay mikirakira ny taratasy ara-panjakana mba hialana amin’iny hosoka. Misy mpanao mari-trano ihany koa ao anatin’ny ekipa mba ahafahana mamorona ny trano manaraka ny fenitra takiana.
Isan’ny antompisian’ny Nova groupe ihany koa ny fanamorana ny fahazoan’ny olona trano izay takatry ny fahefaha-mividy ny rehetra nefa manaraka ny fenitra. Nilaza ny Tale Jeneralin’ny Nova, Andriamatoa Harinosy Yves fa
« efa misy ny fanadihadiana rehetra mba hanamorana ny trano ho zakan’ny olon-tsotra ».
Fanazavan’ny Nova Groupe ny tetikasa fananganan-trano natao ho an’ny rehetra. cc : Toria Dimbiniaina
Eny Ambatobe no misy ireo trano ahorin’ny Nova groupe izay ahitana « villa type F4 » miisa 10 miorina amin’ny velaran-tany 300 m2 sy ny « villa type D6 » miorina amin’ny velaran-tany 500 m2. Samy afaka miatrika rivo-doza ireo fotodrafitrasa ireo avokoa ary nampiasana « polymur ». Ny Orinasa Nova groupe no voalohany nahazo ny fahazoan-dalana hampiasa ny « polymur » eto Madagasikara.
Miisa 30 ny trano ahorina amin’izao taona fanombohana izao. Ahatratra 50 isan-taona kosa izany manomboka ny taona 2021.
Ho fanamorana ny fahazoan’ny olona ny trano dia hisy ny fahafahana mandoa tsikelikely ny vidin’ny trano mandritra ny 15 taona. Azon’ny olon-tsotra na mpiasam-panjakana na tsia ny manjifa ny trano.
Publié dans Economie et Malagasy